निषेधाज्ञाले रोकेन संक्रमण, काठमाडौं उपत्यकामै १४ हजार संक्रमित – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर निषेधाज्ञाले रोकेन संक्रमण, काठमाडौं उपत्यकामै १४ हजार संक्रमित
त्यस्तै, मृत्युदर पनि उच्च छ। भदौ १ देखि १५ गतेसम्म कोरोनाबाट १ सय २४ जनाको मृत्यु भएको थियो। भदौ १६ गतेयता मृत्युदर झन् बढेको छ। भदौ १९ र २२ गते दुई दिनमा २८ जनाको ज्यान गयो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भदौ ३१ गते ८ जनाको ज्यान गएको जानकारी दिए। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले साउनभन्दा भदौमा मृत्युदर बढेको बताए। अहिले मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ।
उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा अहिले संक्रमित छन्। वडा तहमा पनि संक्रमण देखिएको छ। तीनै जिल्लामा भदौ सुरुमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा मात्रै संक्रमितको संख्या ११ हजार २ सय ३५ पुगेको छ। ललितपुरमा १ हजार २ सय ८६ र भक्तपुरमा १ हजार १ सय ४० संक्रमित छन्। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। उक्त निषेधाज्ञा भदौ ३ देखि भदौ २४ गतेसम्म जारी रह्यो।
काठमाडौं उपत्यकामा बुधबार एकै दिन थप ७ सय ३७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उपत्यकामा एकै दिन थपिएको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। मंगलबार उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप ६ सय ७६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। दिनेश गाैतमले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
कपिलवस्तुको बाणगंगामा वडा भेलाहरु आजबाट सुरु , पहिलो दिन ७०..
भारत र चीनका सेनाबीच झडपमा ज्यान गुमाउने भारतीय सेनाको संख्या २० पुग्यो
दैलेखमा थप ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कर्णालीमा मात्र संक्रमितको संख्या ४६